ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဂျပန်နိုင်ငံ လွှတ်တော် House of Councillor ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Yamazaki နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | Pyithu Hluttaw
နေပြည်တော်- နိုဝင်ဘာ ၃၀
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသော ဦးဋ္ဌေးဦး၊ ဦးမောင်မောင်သိမ်း၊ သူရဦးအောင်ကို၊ ဦးလှမြင့်ဦး၊ ဦးဋ္ဌေးမြင့်၊ ဦးအောင်ထွန်း၊ ဒေါက်တာခင်ရွှေ နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး
ဦးခင်မောင်တင် တို့လိုက်ပါလျှက် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ၁၃း၃၀ နာရီချိန်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော်သို့ ရောက်ရှိရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကသည် ဂျပန်နိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Yamazaki နှင့် အထက်လွှတ်တော် အထူးဧည့်သည်တော်များ ခန်းမဆောင်၌ လွှတ်တော်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်း ဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းနောက် ဂျပန်နိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနှင့် မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအား ဂျပန်နိုင်ငံအထက်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ အတွင်း လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ ၀၈း၄၀ နာရီချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးဆောင်သော မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် တိုကျိုမြို့မှ ရထားဖြင့် ထွက်ခွာလာရာ Fukushima မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၁၀း၄၅ နာရီချိန်တွင် ဖူကူရှီးမားခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရုံး ( Prefectural Government )သို့ ရောက်ရှိပြီး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တာဝန်ရှိသူများက ဖူကူရှီးမားမြို့ ငလျင်ဒဏ်ခံခဲ့ရမှု၊ ဆူနာမီဒဏ် ခံစားခဲ့ရမှု၊ နျူကလီးယားမတော်တဆဖြစ်မှုတို့ကြောင့် ဆုံးရှုံးထိခိုက်မှုနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ကောလဟာလသတင်းများကြောင့် ဒေသထွက်ကုန်များဆုံးရှုံးမှု အ‌ခြေအနေများ၊ ဆောင်ရွက်နေသောအ‌ခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ယင်းနောက် ၁၁း၄၀ နာရီချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဖူကူရှီးမားခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Hiraide နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဖူကူရှီးမားခရိုင်အတွင်း ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ‌မြေငလျင်ဒဏ် ခံခဲ့ရမှု၊ ဆူနာမီဒဏ် ခံစားရမှု၊ နျူကလီးယား မတော်တဆဖြစ်မှုတို့ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် များစွာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လူဦးရေ တစ်သိန်းကျော်သေဆုံးပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာဖြစ်ခဲ့ဘူး၍ များစွာစာနာမိ ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ၁၄း၁၅ နာရီချိန်တွင် ဖူကူရှီးမားခရိုင်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း Odagaisama Center သို့ ရောက်ရှိရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းနောက် Odagaisama Center ရှိ ဒုက္ခသည်များနေထိုင်ရာ ယာယီအိမ်ယာ (Temporary Housing)အိမ်ယာအတွင်း ဒုက္ခသည်များအား လိုက်လံအားပေး နှုတ်ဆက်ပြီး ဒုက္ခသည်များအား နှစ်သိမ့်အားပေး ဖျော်ဖြေမှုအစီအစဉ်များအား ဝင်ရောက် အားပေးခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ Odagaisama Center တာဝန်ရှိသူများက ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုအား ရှင်းလင်းပြသသည်။ ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက က Odagaisama Center မှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ဒုက္ခသည်များအား စာနာထောက်ထားကြောင်း အားပေးစကားပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက နှင့် မြန်မာလွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ၁၅း၄၅ နာရီချိန်တွင် Fukushima မြို့ရှိ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ဌာနသို့ရောက်ရှိရာ ရှင်းလင်းဆောင်၌ တာဝန်ရှိသူများက Fukushima Agricultural Technology Center နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး သုတေသနလုပ်ငန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံ ရှင်းလင်းပြသခဲ့သည်။
၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဖူကူရှီးမားမြို့ Koriyama ဘူတာရုံမှ ရထားဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာလာရာ တိုကျိုမြို့သို့ ၁၉း၀၅ နာရီချိန်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ (သတင်းစဉ်)